डा गोबिन्द गोबिन्द केसीलाई यसरी एम्बुलेन्सवाट थुतेर वीर अस्पताल लगियो (भिडियो हेर्नुस्) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/डा गोबिन्द गोबिन्द केसीलाई यसरी एम्बुलेन्सवाट थुतेर वीर अस्पताल लगियो (भिडियो हेर्नुस्)
डा गोबिन्द गोबिन्द केसीलाई यसरी एम्बुलेन्सवाट थुतेर वीर अस्पताल लगियो (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । जुम्लामा अनसन बस्न पुगेका डा गोबिन्द केसीलाई काठमाडौ ल्याइएको छ । जुम्लामा अनसन बस्दा स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएका डा केसी नेपालगंज आएका थिए । मंगलवार उनी नेपालगंजबाट बुद्ध एयर हुँदै काठमाडौं आइपुगेका थिए । काठमाडौमा शिक्षण अस्पतालमा अनसन बस्ने योजना बनाएका डा गोविन्द केसीलाई प्रहरीले ट्रमा सेन्टर लगेको छ।
जुम्लामा १९ औं अनशन थालेका डा केसी आज आफ्नै खर्चमा काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनी महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा अनशन बस्ने योजनाका साथ काठमाडौं आएपनि उनलाई प्रहरीले एम्बुलेन्सवाट निकालेर ट्रमा सेन्टर लगेको छ । डा केसीलाई प्रहरीले एम्बुलेन्सवाट निकालेर अस्पताल लगेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनको इच्छा विपरित ट्रमा सेन्टर लगिएको हो ।
प्रहरीले उनलाई एरपोर्टबाटै बल प्रयोग गरेर ट्रमा सेन्टर लगेको देख्न सकिन्छ । ट्रमा पुगेपछि केसीले आफू एम्बुलेन्सबाट नओर्लने बताएका थिए। रुष्ट केसीले प्रहरीलाई आफ्नो इच्छा विपरित नगर्न समेत आग्रह गरेको भिडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
ुम जान्न भनेको। यो प्रहरीको गुण्डागर्दी हो। तिमले भन्नु पर्दैन। म टिचिङ हस्पिटलको होइन ? मलाई थाहा छैन्, उनले सरकार विरुद्ध नारावाजी पनि गरेका थिए । प्रहरीले उनलाई कोरोनाका कारण ट्रमा लान खोजेको बताएको थियो। तर केसीले आफू चिकित्सक भएकाले कोरोनाबारे जानकार भएको जवाफ दिएका थिए।
साउदीबाट पीडित युवकको पुकार- ‘मलाई नेपाल फर्काइदेऊ, आफ्नै गाउँमा मर्न पाउँ’
अभिनयले करोडौंको मालिक बनायो काली बुढीलाई,घर पुग्दा यस्तो देखियो (भिडियो हेर्नुस्)
अन्तरजातिय विवाह गरेको कारण बहिनीलाई दाईहरुले नै ज्यान लिए शव नै गायब
ओहो ! “न त मन्त्री न राजाको सालो हो” भन्दै बालेनको पक्षमा र्याप गाउदै नारा लगाउने नानिले यसरी बालेनको समर्थन गर्दै (भिडियो हेर्नुस्)